भोलिबाट लकडाउन ७७ जिल्लामा यस्तो हुने : भर्खरै सकियो बैठक – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/भोलिबाट लकडाउन ७७ जिल्लामा यस्तो हुने : भर्खरै सकियो बैठक
ठमाडौं। २३ वर्षकी एक युवतीलाई बच्चा जन्माउने लत लागेको छ । उनले अहिलेसम्म ११ बच्चा जन्माइसकेकी छिन् र उनी सय बच्चा जन्माउन चाहन्छिन् । रुसकी २३ वर्षकी क्रिस्टिना ओज्टर्कले अहिले नै ११ बच्चाको पालन पोषण गरिरहेकी छिन् । न्यूजफ्ल्याश मिडियासँग कुरा गर्दै क्रिस्टिनाले बताएअनुसार उनले ६ वर्ष पहिले छोरी जन्माएकी थिइन् । त्यसपछि बाँकी सन्तान उनले सेरोगेसीको माध्यमबाट जन्माएकी हुन् । यी सबै सन्तानहरु उनकै जेनेटिक्सका हुन् । उनले आफूहरुले कैयौं बच्चा जन्माउन चाहेको बताएकी छिन् । यो उच्च वर्गीय दम्पतीले सामाजिक संजालमा गरेको एक पोस्टमा आफूहरुले १०५ बच्चा चाहेको बताएका थिए । त्यसपछि उनीहरुको यो पोस्ट भाइरल भएको थियो । क्रिस्टिनाले भने यस विषयमा कुरा गर्दै भनिन् ‘संख्यालाई लिएर हामी पूर्ण रुपमा आश्वस्त छैनौं तर यो निश्चित हो कि हामी ११ मा रोकिनेवाला छैनौं ।’ अहिलेसम्म आफूहरुले अन्तिम संख्या निश्चित गर्न नसकेको बताउँदै क्रिस्टिनाले भनिन् ‘मलाई लाग्छ हरेक कुराको एउटा समय हुन्छ र हामीले त्यही हिसाबमा सबै कुरा सोच्नु पर्छ ।’ यो परिवार जर्जियाको बातुमी शहरमा बस्छन् । यो शहरमा सेरोगेसी गैरकानुनी छैन र सेरोगेट महिलाहरुलाई गर्भवती हुनको लागि प्रयोग गर्न कुनै आपत्ति छैन । यद्यपि सेरोगेसीको माध्यमबाट बच्चा जन्माउने पूरै प्रक्रियाको मूल्य लगभग ८ हजार युरो (११ लाख २८ हजार रुपैयाँ) पर्छ । यति यो परिवारले १०० बच्चा चाहन्छन् भने त्यसको लागि उनीहरुले ११ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रिस्टिनाका अनुसार बातुमीमा उनीहरु जुन क्लिनिकमा सेरोगेसीका लागि जान्छन् त्यो क्लिनिकले नै उनीहरुको लागि सेरोगेट महिला खोजिदिन्छ र यो पूरै प्रक्रियाको जिम्मेवारी क्लिनिकको हुन्छ । क्रिस्टिनाको परिवार व्यक्तिगत रुपमा ती महिलाहरुसँग सम्पर्कमा हुँदैन । यो पनिपढ़नु होस:एकसाथ मिलाएर खान नहुने ५ फलफूल हरेक फलफूलको सेवन स्वास्थ्यकालागि लाभदायक मानिन्छ । फलफूलमा हाम्रो शरीरमा चाहिने पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । तर कतिपय अवस्थामा भने फलफूलले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्दैन । यदि सही फलफूलको मिश्रण हुन नसकेमा यसको सेवन विषाक्त बन्छ र यसले शरीरमा क्षती पुर्याउँछ । के के हुन् त्यस्ता फलफूल ? १. दुध र सुन्तला सुन्तला वा सुन्तलाको जुससँग दुध एवम् दुधजन्य परिकार मिलाएर खानु स्वास्थ्यकालागि हानिकार हुन्छ । यसले पाचनयन्त्रमा समस्या निम्त्याउँछ । २. अम्बा र केरा अम्बाको सेवन स्वास्थ्यकालागी लाभदायक मानिन्छ । यसका साथै केराको सेवन पनि लाभदायक नै हुन्छ । तर, अम्बा र केराको मिलाएर खाइयो भने यसले टाउको दुख्ने, पेट दुख्नेलगायको समस्या हुनसक्छ । ३. मेवा र कागती कतिले स्वादका लागि मेवाको सेवन गर्दा कागतीको रस मिसाएर खाने गर्छन् । तर यसले शरीरमा हानी गर्छ । कागती र मेवाको रस मिसाएर सेवन गर्दा हेमोग्लोबिन सम्वन्धी समस्या समेत आउन सक्छ । विशेषगरी बच्चालाई मेवा र कागती मिलाएर ख्वाउनु हुदैन । ४. दुध र भूँइकटहर दुध र भूँइकटर आपसमा मिसाएर खानु हुदैन । एकै पटक यी फल खाएमा यसले पाचनतन्त्रमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । ५. सुन्तला र गाजर सुन्तला र गाजर अलग अलग खानु स्वास्थ्यकालागी लाभदायक हुन्छ । तर, यी दुईको मिश्रण भने हानिकारक हुन्छ । यसले शरीरमा गम्भीर हानी पुर्‍याउन सक्छ ।
भारी बोक्ने नाम्लो, अहिले भोको पेटमा कसिएको छ !